Momba anay - Zhongshan City Jiawang Metal Products Co., Ltd.
Zhongshan City Jiawang Metal Products Co., Ltd. dia
manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana sy famokarana stainlmilentika ao an-dakozia baoritra, izay hita ao amin'ny Tanànan'i Dongfeng, Zhongshan City, Faritanin'i Guangdong.
Manana ny orinasa mamboarina izahay manokana mba hiatrehana ny fitomboan'ny orinasa ary mifanaraka amin'ny fangatahan'ny maodely vaovao. Amin'izao fotoana izao, maodely maoderina 100 samihafa no manana ao an-tsenanay.
Tsy vitan'ny hoe manolotra lakozika an-dakozia izahay, fa koa ireo hevitra ho an'ny mpanjifantsika.A fifandraisan'ny orinasam-pifandraisana maharitra sy fandresena dia tanterahina tokoa ao amin'ny orinasa.Choose Jiawang, selectyourdevelopingbusiness.
Ny fahitantsika: Hamoronana vokatra mahomby
hanohy hihainoana sy hahafaly ny filan'ny mpampiasa, hitarika ary hihoatra ny filan'ny mpampiasa ary handresye rezava-misy an'ny mpampiasa;
Amin'ny alàlan'ny fanandratana ny satan'ny orinasa sy ny marika, ka ireo mpiasa manana fahatsapana ambony haja amam-boninahitra, raiso ny mpiasa manaja;
Mampiroborobo ny fampandrosoana ara-pahasalamana ny indostrian'ny Internet, miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampiroboroboana sy fandresen-dahatra fanajana;
Mifantoha amin'ny andraikitra amin'ny orinasa, mikarakara ny fiarahamonina, avereno ny fiaraha-monina, mandresy fanajana ara-tsosialy.
Soa amin'ny orinasa: Professionalism, Dedication, integrity ary Win- -win
● Ny fanavaozana mikendry ny hanomezana lanja ny mpanjifa;
● Afaka mamorona ny olon-drehetra, afaka mamorona ny zava-drehetra;
● Sahy manandrana, aza matahotra ny tsy fahombiazana, mahay mamintina
Filozôma ara-barotra: soatoavina ho an'ny mpampiasa rehetra
Mifantoha amin'ny fampandrosoana maharitra fa tsy noho ny tombotsoan'ny orinasa mandratra ny sandan'ny mpampiasa, ny fiahiahy ary ny fahatakarana lalina ny filan'ny mpanjifa, ary ny hatsarana hatrany amin'ny vokatra. ary serivisy hamenoana ny filan'ny mpampiasa;
Ny maha-zava-dehibe ny fifandraisana ara-pihetseham-po amin'ny mpampiasa, ny fanajana ny traikefan'ny mpampiasa, miaraka amin'ny mpampiasa.
Ny iraka ataonay: hanomezana mpanjifa amina kojakoja mahomby, manisy lanja ny vokatra ary manatsara ny serivisy
Manamboatra vokatra sy serivisy ho an'ny olona;
Nifantoka tamin'ireo faritra isan-karazany, vondrona isan-karazany, zavatra samihafa ary manome serivisy fanaingoana samihafa;
Mamorona sehatra misokatra sy mandresy, miara-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka hamoronana tontolo iainana mahasalama.